स्टुडियो टाईम : १३:५८
बालिका मादेन । आज थप ५ सय ५४ जनामा कोरोना भाईरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या १२ हजार ३ सय ९ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आजको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा आज थप ४ सय ३४ जना पुरुष र एक सय २० जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो ।
आज ७७ जिल्लाका १० हजार ९ सय ४० जना पुरुष र १ हजार ३ सय ६९ जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यसैगरी आज थप एक सय ३६ जना कोरोना भाइरसको संक्रमण मुक्त भएसंगै संक्रमण मुक्त भई घर फर्किनेको संख्या २ हजार ८ सय ३४ पुगेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आज १ सय १८ जना पुरूष र १८ जना महिला संक्रमण मुक्त भएका छन् ।
नेपालमा हाल सम्म २ सय ४२ जना महिला र २ हजार ५ सय ९२ जना पुरुष संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ७ का ५० वर्षिय संक्रमण पुष्टी भएका एक पूरुषको उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको छ ।
फोक्सो क्यान्सर पीडित ती पुरुषको भरतपुर अस्पतालको आईसोलेसनमा उपचारका क्रममा बिहान मृत्यृ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आज थप एक संक्रमितको मृत्यृभएसँगै संक्रमण पुष्टी भई मृत्यु हुनेको संख्या २८ पुगेको छ ।
देशका विभिन्न प्रयोगशालामा हालसम्म जम्मा २ लाख १० हजार ८ सय ७६ वटा पिसीआर तथा २ लाख ९४ हजार ३४ वटा आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरिएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार ६ सय ६ वटा पिसीआर तथा ३ हजार ६ सय ८५ वटा आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी आज देशका विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टाइनमा ६५ हजार ७ सय १२ जना रहेका छन् भने विभिन्न आईसोलेसन स्थलहरुमा ९ हजार ४ सय ४७ जना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो ।